ट्रामाडोल बनाम हाइड्रोकोडोन: भिन्नता, समानता, र कुन अझ राम्रो हो - औषधि बनाम मित्र | सेप्टेम्बर 2021
प्रेस घरपालुवा जनावर समुदाय, कल्याण समाचार, कल्याण समुदाय, कम्पनी खेलहरु औषधि बनाम मित्र औषधि जानकारी, समाचार कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण औषधि जानकारी स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार कम्पनी, समाचार
मुख्य >> औषधि बनाम मित्र >> ट्रामाडोल बनाम हाइड्रोकोडोन: भिन्नता, समानताहरू, र कुन तपाईंको लागि उत्तम हो
ट्रामाडोल बनाम हाइड्रोकोडोन: भिन्नता, समानताहरू, र कुन तपाईंको लागि उत्तम हो
ट्रामाडोल र हाइड्रोकोडोन दुई औषधी हो जुन दुखाइको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ जुन नन-ओपियोइड एनाल्जेसिकसँग सजिलै राहत हुँदैन। दुबै औषधीहरूले शल्यक्रिया पछि वा पुरानो अवस्थामा जस्तै क्यान्सर जस्ता मध्यमबाट गम्भीर पीडाको उपचार गर्न सक्दछन्। यद्यपि दुखाईका धेरै केसहरूमा नन-ओपिओइड थेरापी सामान्यतया पहिला प्रयोग गरिन्छ।
दुबै ट्रामाडो एल र हाइड्रोकोडोन म्यू ओपियोइड रिसेप्टर्सलाई बाँधेर काम गर्दछन् कसरी एक व्यक्तिले पीडाको प्रतिक्रिया दिन्छ। प्रिस्क्रिप्शन ओपियोइड्सको रूपमा, ती तपाईंको औसत ओभर-द-काउन्टर दुखाइ राहत पाउने भन्दा बढी सामर्थ्यशाली छन्। तसर्थ, यी ड्रग्सलाई तपाइँको दुखाई आकलन गर्न डाक्टरको साथ आवाश्यक हुन्छ।
ट्रामाडोल र हाइड्रोकोडोन बीचको मुख्य भिन्नता के हो?
ट्रामाडोल अल्ट्राम, अल्ट्राम ईआर, र कान्जिपका लागि जेनेरिक नाम हो। यो एक अनुसूची IV मादकको रूपमा DEA अनुसार यसको दुरुपयोग को लागी केहि सम्भावना को अनुसार मादक हो। जबकि यसले म्यू ओपिओइड रिसेप्टर्सहरूलाई बाँध्छ, यसले अन्य मस्तिष्क न्यूरोट्रान्समिटरहरू जस्तै नोरिपिनेफ्रिन र सेरोटोनिनको गतिविधि पनि बढाउन सक्दछ।
हाइड्रोकोडोन जोहिड्रो ईआर र हिसिंगला ईआरको सामान्य नाम हो। हाइड्रोकोडोनलाई विकोडिन वा लोरटब ब्रान्ड अन्तर्गत एसिटामिनोफेनको साथ एक संयोजन ट्याब्लेटको रूपमा पनि लिइन्छ। ट्रामाडोल विपरीत, हाइड्रोकोडोन एक तालिका II DEA नियन्त्रित औषधी हो जसको दुरुपयोगको उच्च जोखिम छ।
ट्रामाडोल र हाइड्रोकोडोन बीचमा मुख्य भिन्नता
औषधि वर्ग ओपिओइड ओपिओइड
ब्रान्ड नाम के हो? जेनेरिक: ट्रामाडोल
ब्रान्ड: अल्ट्राम, अल्ट्राम ईआर जेनेरिक: हाइड्रोकोडोन
ब्रान्ड: जोहिड्रो ईआर, हिसिing्गला ईआर, भिकोडिन (एसिटामिनोफेनको साथ मिलाएर), लोरटब (एसिटामिनोफेनको साथ जोडीएको), नोर्को (एसिटामिनोफेनसँग मिलेर)
मौखिक निलम्बन मौखिक ट्याब्लेट
मानक खुराक के हो? Ultram: to० देखि १०० मिलीग्राम प्रत्येक to देखि hours घण्टा आवश्यकता अनुसार
Ultram ER: १०० मिलीग्राम प्रत्येक २ 24 घण्टा जोहिड्रो ईआर: १० मिग्रि प्रत्येक १२ घण्टा
Hysingla ER: २० मिलीग्राम प्रत्येक २ hours घण्टा
भिकोडिन, लोर्ताब, नर्को (एसिटामिनोफेनको साथ संयोजन): to देखि १० मिलीग्राम प्रत्येक to देखि hours घण्टा आवश्यकता अनुसार
विशिष्ट उपचार कति लामो हुन्छ? दैनिक आवश्यकता अनुसार।
उपचार अवधि तपाईंको डाक्टरको निर्देशनमा निर्भर गर्दछ। दैनिक आवश्यकता अनुसार।
उपचार अवधि तपाईंको डाक्टरको निर्देशनमा निर्भर गर्दछ।
अवस्था ट्रामाडोल र हाइड्रोकोडोन द्वारा उपचार
ट्रामाडोल र हाइड्रोकोडोन दुबै दुखाई व्यवस्थापनको लागि संकेत गरीएको छ। ती सामान्यतया सिफारिश गरिएको छ यदि तपाईं मध्यम गम्भीर गम्भीर दुखाइ छ, विशेष गरी क्यान्सर जस्ता सर्तबाट। दुबै औषधीहरू पनि सामान्यतया चोटपटक र शल्यक्रिया पछि दुखाइको लागि प्रयोग गरिन्छ।
कसरी एन्टिबायोटिक लिने बेला एक खमीर संक्रमण को रोकथाम गर्न को लागी
सर्त ट्रामाडोल हाइड्रोकोडोन
दीर्घकालीन पीडा हो हो
चोटपटकबाट वा शल्यक्रिया पछि पीडा हो हो
क्यान्सर दर्द हो हो
के ट्रामाडोल वा हाइड्रोकोडोन बढी प्रभावकारी छ?
ट्रामाडोल र हाइड्रोकोडोन दुबै पीडाको लागि प्रभावकारी पर्चा ओपिओइडहरू हुन्। त्यहाँ उनीहरूको प्रभावकारिता तुलना गर्ने धेरै अध्ययनहरू छन्। किनभने हाइड्रोकोडोन एक अनुसूची २ ओपिट हो, यो अधिक शक्तिशाली मानिन्छ यद्यपि यो दुरुपयोगको लागि उच्च सम्भावनाको साथ आउँदछ। ट्रामाडोलको कम दुरुपयोग क्षमताको साथै हल्का साईड इफेक्ट पनि हुन सक्छ।
एक मा मल्टीसेन्टर अध्ययन , एसिटामिनोफेनको साथ ट्रामाडोललाई हाड्रोकोडोनसँग एसीटामिनोफेनको साथ दाँतको दाँतको ठाउँमा तुलना गरिएको थियो। करीव patients०० बिरामीहरूलाई दुई समूहमा विभाजन गरिएको थियो जसमा एक औषधि वा अर्को प्राप्त थियो। परिणामहरूले पत्ता लगाए कि दुबै औषधोपचारहरूले प्लेसबो विरूद्ध चार घण्टा भित्र तुलनात्मक पीडा राहत प्रदान गर्दछ।
अर्कोमा प्रयोगसाला परिक्षण , एसिटामिनोफेनको साथ हाइड्रोकोडोनलाई patients 68 बिरामीहरूमा ट्रामाडोलसँग तुलना गरिएको थियो। यी बिरामीहरू आपतकालिन विभागमा उनीहरूको जोर्नीहरू, हड्डीहरू, वा मांसपेशिहरूमा मांसपेशीहरूको पीडाको लागि आएका थिए। परिणामहरूले पत्ता लगाए कि एसिटामिनोफेनको साथ हाइड्रोकोडोनले ट्रामाडोलको तुलनामा दर्दनाक एनालग स्केल (VAS) को साथ दर्द स्कोरको आधारमा बढी पीडा राहत प्रदान गर्दछ।
मा डबल ब्लाइन्ड ट्रायल , एसिटामिनोफेनको साथ हाइड्रोकोडोनलाई क्यान्सरबाट लामो पीडा भएका ११8 बिरामीहरूमा ट्रामाडोलसँग तुलना गरिएको थियो। ट्रामाडोलले pain२. patients% बिरामीहरूमा पीडाबाट राहत देखायो। जे होस्, दुखाइ राहत दुवै समूहमा समान थियो। ट्रामाडोलले हाइड्रोकोडोन बिरूद्ध हल्का साइड इफेक्टहरू पनि फेला पार्यो।
चाहे तपाइँ निर्धारित ट्रामाडोल वा हाइड्रोकोडोन तपाईको दुखाईको स्तरमा अत्यधिक निर्भर छन्। जब तपाइँको दु: खको आकलन गर्दा, तपाइँको डाक्टरले तपाइँको पूर्ण चिकित्सा ईतिहास, कुनै पनि पदार्थ दुर्व्यसन को इतिहास, र कुनै पनि औषधि जो ड्रग अन्तरक्रियाको कारण हुन सक्छ। त्यसकारण, दुखाई औषधीहरू अत्यधिक व्यक्तिगतकृत हुन्छन् र कुन चिकित्सकको परामर्श आवश्यक पर्दछ जुन तपाइँको लागि अझ प्रभावकारी हुनेछ।
कभरेज र ट्रामाडोल बनाम हाइड्रोकोडोनको लागत तुलना
ट्रामाडोल जेनेरिक औषधिको रूपमा उपलब्ध छ। यो सामान्यतया चिकित्सा र धेरै बीमा योजनाहरु द्वारा कभर गरिएको छ। Si० मिलीग्राम ट्रामाडोल ट्याब्लेटहरूको आपूर्ति लागत औसत around around० को आसपास छ। तपाईको स्थानीय फार्मेसीमा जेनेरिक ट्रामाडोलको लागि एकलकेयर कूपनको साथ अधिक बचत गर्नुहोस्।
हाइड्रोकोडोन एक जेनेरिक औषधि हो जुन प्राय: मेडिकेयर र धेरै जसो बीमा योजनाहरूले ढाक्छ। हाइड्रोकोडोनको लागत विभिन्न बीमा योजनाहरू बीच भिन्न हुन्छ। नर्को जसमा हाइड्रोकोडोन र एसिटामिनोफेन $ 7१7 को औसत लागतमा चल्न सक्छ। एकलकेयर कूपनको साथ, तपाईं एसिटामिनोफेनको साथ हाइड्रोकोडोनको लागि प्रिस्क्रिप्शनमा अधिक बचत गर्न सक्नुहुन्छ।
मानक खुराक Mg० मिलीग्राम ट्याब्लेट (of० को आपूर्ति)
तपाईंको डाक्टरको पर्दामा निर्भर गर्दछ -3--3२ mg मिलीग्राम ट्याब्लेट (१०० को आपूर्ति)
तपाईंको डाक्टरको पर्दामा निर्भर गर्दछ
विशिष्ट मेडिकेयर कोपे $ 407317
एकलकेयर लागत $ १। $ १
ट्रामाडोल र हाइड्रोकोडोनको सामान्य साइड इफेक्टहरू
ट्रामाडोल र हाइड्रोकोडोनले उस्तै साइड इफेक्टहरू निम्त्याउन सक्छ। किनभने ती दुबै केन्द्रीय स्नायु प्रणाली (सीएनएस) लाई असर गर्दछ, ती दुबै चक्कर आउने, निन्द्रा र थकानको कारण हुन सक्छन्। यी औषधीहरूले पनि जठरांत्र साइड इफेक्टहरू जस्तै कब्ज वा पेट दुखाइ हुन सक्छ। मतली, बान्ता, सुख्खा मुख, र टाउको दुख्ने अन्य साझा साइड इफेक्ट हो।
ट्रामाडोलले पखाला, अपच, र केहि व्यक्तिहरूमा पसीना पनि निम्त्याउन सक्छ। अर्कोतर्फ, हाइड्रोकोडोनले केही व्यक्तिहरूमा फ्ल्युल्ड बिल्डअप (एडेमा) वा मांसपेशिको ऐंठन निम्त्याउन सक्छ। समग्रमा, सामान्य साइड इफेक्ट यी दुई औषधिहरू बीच ओभरल्याप हुन सक्दछ किनभने तिनीहरू एउटै कक्षामा छन्।
ट्रामाडोल र हाइड्रोकोडोनको अन्य दुर्लभ तर गम्भीर साइड इफेक्टहरूमा चिन्ता, डिप्रेसन, वा अन्य मनोवैज्ञानिक गडबडी समावेश हुन सक्छ। एलर्जी प्रतिक्रियाहरू पनि सम्भव छ र दाना, फ्लशिंग, र छाती दुखाई समावेश हुन सक्छ।
कब्ज हो २-4--46% हो एघार%
चक्कर हो २-3--33% हो %%
मतली हो २--40०% हो १०%
टाउको दुखाई हो १-3--3२% हो %%
तन्द्रा हो १-2-२5% हो %%
बान्ता हो -17 -१%% हो %%
खुजली (प्रुरिटस) हो -11-११% हो %%
कमजोरी हो -12-१२% हो %%
पसिना हो 6--9% हैन -
अपच हो -13-१-13% हैन -
सुख्खा मुख हो -10-१०% हो %%
पखाला हो -10-१०% हैन -
इडेमा हैन - हो १%
श्वसन संक्रमण हैन - हो १%
मांसपेशी ऐंठन हैन - हो १%
मुहान: डेलीमेड (ट्रामाडोल एचसीएल) , डेलीमेड (जोहिड्रो ईआर) ।
ट्रामाडोल बनाम हाइड्रोकोडोनको ड्रग अन्तरक्रिया
ट्रामाडोल र हाइड्रोकोडोनको अन्य ड्रगहरूसँग समान अन्तरक्रिया हुन्छ। किनभने ती कलेजोमा मेटाबोलिज्ड हुन्छन्, तिनीहरू अन्य औषधिहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दछन् जसले कलेजोको एन्जाइमहरूलाई असर गर्दछ।
CYP3A4 र CYP2D6 कलेजो एन्जाइमहरूलाई रोक्ने औषधिहरूले एरिथ्रोमाइसिन, केटोकोनाजोल र रिटोनाभिर समावेश गर्दछ जसले शरीरमा ओपिओइडको स्तर बढाउन र साइड इफेक्टको जोखिम बढाउन सक्छ। ड्रग्स जसले CYP3A4 कलेजो एन्जाइमलाई प्रेरणा दिन्छ कार्बामाजेपाइन र फेनिटोइन समावेश गर्दछ जसले शरीरमा ओपिओइडको स्तर घटाउन सक्छ र उनीहरूको प्रभावकारितालाई घटाउँछ।
ट्रामाडोल र हाइड्रोकोडोनले अन्य औषधिहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्न सक्छ जुन CNS साइड इफेक्टहरू छन्। यस प्रकारका ड्रग्सहरूमा एन्टीडिप्रेससन्ट, एन्टिकोनवाल्सेन्ट्स, बेंजोडाइजेपाइन, मांसपेशी रिलक्सरहरू, र अन्य धेरै समावेश छन्। सेरोटोनिन बढाउने एन्टिडिप्रेसन्ट्ससँग ओपियोइड्स लिंदा सेरोटोनिन सिन्ड्रोमको जोखिम बढ्न सक्छ, गम्भीर अवस्था जसमा आपतकालीन चिकित्सा उपचार आवश्यक पर्दछ।
एफडीए औषधि लेबलका अनुसार, ट्रामाडोलले डिगोक्सिन र वारफेरिनसँग अन्तर्क्रिया गर्न पनि सक्छ। रिपोर्टले डिगॉक्सिन विषाक्तता र परिवर्तन गरिएको वारफेरिन प्रभावहरूका विरल घटनाहरू भेट्टाए। हाइड्रोकोडोनको लागि एफडीए लेबलले यो पनि उल्लेख गर्दछ कि बलियो रेचकले शरीरमा हाइड्रोकोडोनको प्रभावहरू कम गर्न सक्छ।
ओपियोड्सको प्रयोग गर्दा रक्सी पिउन सिफारिस गर्दैन। रक्सीले ओपोइड्सको साइड इफेक्टहरूमा कम्पाउन्ड गर्न सक्दछ जस्तै निद्रा र चक्कर।
बेचैन खुट्टा सिंड्रोम को लागी म्याग्नेशियम को सबै भन्दा राम्रो रूप
औषधि ड्रग क्लास ट्रामाडोल हाइड्रोकोडोन
Citalopram चयनित सेरोटोनिन पुनःअपटेक इनहिबिटर (एसएसआरआई) एंटीडिप्रेसन्ट हो हो
डेसेभेन्फाक्सिन सेरोटोनिन-नोरपाइनफ्रिन पुनःअपटेक इनहिबिटर (एसएसएनआरआई) एंटीडप्रेससन्ट हो हो
Nortriptyline TCA antidepressant हो हो
Zolmitriptan Triptan हो हो
ल्याक्टुलोज कडा रेचक हैन हो
डिजोक्सिन कार्डियक ग्लाइकोसाइड हो हैन
ट्रामाडोल र हाइड्रोकोडोनको चेतावनी
ट्रामाडोल र हाइड्रोकोडोन लागू र दुरुपयोगको लागि चेतावनी बोक्छ यदि निर्धारितको रूपमा प्रयोग गरिएको छैन। लतले शारीरिक निर्भरता निम्त्याउँछ जुन फिर्ता निकाल्ने लक्षणहरूको परिणाम हुन सक्छ यदि औषधि कुनै पनि कारणले रोकिन्छ भने। फिर्ता लक्षणहरूमा चिन्ता, अनिद्रा, र आन्दोलन समावेश हुन सक्छ।
ओपियोड्सको निर्धारित मात्रा भन्दा बढी लिनुले ओभरडोज, कोमा र मृत्युको जोखिम बढाउन सक्छ। जीवनलाई जोखिमपूर्ण पार्ने प्रभावहरू जस्तै गम्भीर श्वासप्रसाद अवसाद र स्टुपर अधिक मात्रामा हुन सक्छ। यस कारणका लागि, बच्चाहरूमा ओपिओइड सिफारिश गरिँदैन जोखिम बढेको कारण सास फेर्न समस्या र मृत्यु ।
रक्सी पिउन वा ओपियोइडको साथमा अन्य CNS ड्रगहरू लिन सिफारिस गरिदैन। यो किनभने तिनीहरू सीडेसन, ढिलो सास फेर्दै, कोमा, र मृत्यु जस्ता सीएनएस प्रभावहरूको जोखिम बढाउँछन्। जबकि अधिक डाटा आवश्यक छ, नयाँ अनुसन्धान सुझाव दिन्छ कि ट्रामाडोलको जबरजस्त मृत्युको उच्च जोखिम एन्टी-इन्फ्लेमेटरी औषधीहरूको तुलनामा हुन सक्छ।
ट्रामाडोल र हाइड्रोकोडोन दुबै गर्भावस्थाको श्रेणी सीमा छन्। त्यसकारण, ती गर्भवती वा स्तनपान गराउने महिलाहरूको लागि सामान्यतया सिफारिस गरिदैन किनभने गर्भमा रहेको बच्चालाई हानी हुने खतराको कारण छ। यदि तपाईं गर्भवती हुनुहुन्छ वा गर्भावस्थाको योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने चिकित्सा सल्लाह लिनुहोस्।
ट्रामाडोल बनाम हाइड्रोकोडोनको बारेमा प्राय: सोधिने प्रश्नहरू
ट्रामाडोल के हो?
ट्रामाडोल एक ओपिओइड औषधि हो जुन मध्यमदेखि गम्भीर दुखाइको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ। यो एक तालिका IV औषधि हो कि एक पर्ची र एक डाक्टर द्वारा एक दर्द मूल्यांकन आवश्यकता छ। यो पीडा गम्भिरताको आधारमा एक तत्काल रिलीज र विस्तारित-रिलीज फारममा उपलब्ध छ।
हाइड्रोकोडोन भनेको के हो?
हाइड्रोकोडोन एक ओपियोइड औषधि हो जसले मध्यमदेखि गम्भीर दुखाईको उपचार गर्न सक्छ। यो एक तालिका दोस्रो औषधि हो कि दुरुपयोग र निर्भरता को लागी एक उच्च क्षमता हुन सक्छ। यो एक विस्तारित-रिलीज फारमको साथै एसिटामिनोफेनको साथ संयोजन गोलीमा उपलब्ध छ।
के ट्रामाडोल र हाइड्रोकोडोन एकै हो?
जे होस् ती दुबै ओपिओइडहरू हुन्, ट्रामाडोल र हाइड्रोकोडोन एकै हुँदैनन्। तपाईंले अनुभव गरिरहनु भएको पीडामा निर्भर गर्दै ती समान प्रयोगहरू छन्। तर तिनीहरू पनि बिभिन्न खुराक फारमहरूमा आउँदछन् र केहि फरक साइड इफेक्ट र ड्रग अन्तरक्रिया छन्।
के ट्रामाडोल वा हाइड्रोकोडोन राम्रो छ?
अध्ययनले देखाउँदछ कि ट्रामाडोल र हाइड्रोकोडोन दुबै दुखाइको लागि तुलनात्मक रूपमा प्रभावकारी छन्। केहि रिपोर्टले देखाउँदछ कि ट्रामाडोलको हाइड्रोकोडोनको तुलनामा हल्का साइड इफेक्टहरू छन्। यद्यपि, अन्य अध्ययनहरूले देखाउँदछ कि हाइड्रोकोडोन बढी शक्तिशाली छ र केही व्यक्तिहरूमा पीडा राहत दिन्छ।
के ट्रामाडोल कोडेइन भन्दा मजबूत छ?
दुबै ट्रामाडोल र कोडिनले दुखाइ कम गर्न सक्छन र ती दुबै तुलनात्मक रूपमा कमजोर ओपिओइड मानिन्छन्। यद्यपि तिनीहरू तिनीहरूको साइड इफेक्ट र प्रयोगमा भिन्न हुन सक्दछन्। ट्रामाडोलको विपरीत, कोडेइन खोकी सप्रेसन्टको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
ट्रामाडोल एक ओपिट हो?
हो। ट्रामाडोल एक ओपियट मादक पदार्थ हो। यो सिंथेटिक रूपमा बनाईएको छ र अन्य ओपिओइड दुखाइ कम गर्ने जस्तो औषधि वर्गमा छ। एक अनुसूची IV औषधि को रूप मा, यो दुरुपयोग र अन्य ओपियोइडको तुलनामा निर्भरता कम सम्भावना छ।
के हाइड्रोकोडोन एक ओपियोइड हो?
हो। हाइड्रोकोडोन एक ओपिओइड हो। यो एक अर्ध-सिंथेटिक ओपिओइड हो कि अन्य प्राकृतिक ओपिड्स जस्तै मोर्फिन वा कोडिनमा यस्तै प्रभावहरू हुन्छ।
चिसो संग के खाने छैन
वयस्कों को लागी सबै भन्दा राम्रो कफ सिरप के हो
कसरी छिटो र स्वाभाविक रूप मा रक्तचाप कम गर्न को लागी
रुघाखोकी लाग्न कति समय लाग्छ?
के औषधिहरु पीसीपी को लागी एक गलत सकारात्मक हुन सक्छ
टाइप २ मधुमेह को लागी एक राम्रो रक्त शर्करा स्तर के हो